Dowlada oo ka laabatay Go’ankii aha in Al shabaab loogu yeero UGUS – SBC
Dowlada oo ka laabatay Go’ankii aha in Al shabaab loogu yeero UGUS
Posted by SBC Editor on Juun 12, 2015 Comments
G/Gobolka Banaadir oo kulan la qaatay Wafdi ka socday Turkiga
Taliyaha Cusub ee Booliska oo Xilka la Wareegay
Doorashada kursi ka tirsan Golaha Shacabka oo buuq Ku Soo Dhamaatay.
Wasiirka warfaafinta Soomalaiya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in Dowlada Soomaaliya ay ka laabatay go’aankii warbaahinta Madaxa Banaan lagu amrayay inay Alshabaab ugu yeeraan magaca UGUS oo macnaheedu yahay Ururka Gumaadka Umadda Soomaaliyeed.
“Dowlada Faderaalka Soomaaliya iyadoo tixgalineysa madax banaanida Warbaahinta Soomaaliyeed ayay ka laabatay Go’aankeedii ahaa in Saxaafadu Alshabaab ugu yeerto UGUS”ayuu yiri Wasiir Mareeye Oo La Hadlay Tv-Ga Universal.
Warkaa ayaa markiisii hore waxaa uu ka soo baxay taliyaha Nabad sugida Dowlada C/raxmaan Tuuryare kaasoo saxaafada ku amrey inay hadda kadib alshabaab ugu yeeraan UGUS.
Amarkaasi markii uu soo baxay ma jirin warbaahin amarlaasi fulisay marka laga reebo warbaahinta gaarka u ah Dowlada sida TV-ga iyo Raadiyaha Dowlada .
Sidoo kale Xoogaga Alshabaab oo ka jawaabayay Magacaan ayaa iyagana isla magacii dhanka kale u badaleen kadibna go’aansadeen inay iyaguna dowlada ugu yeeraan UGUS oo macnaheedu yahay ururka gumeynta Umada Sooomaaliyeed.
Si kastaba warbaahinta Madaxa Banaan ayaa soo dhaweneysa ka laabashada Dowlada marka la eego amar aad ugu adkaa Saxaafada Madaxa banaan inay Fuliyaan.